Nnwom 22 NA-TWI - Awerɛhow mu su ne ayeyi dwom - Me - Bible Gateway
Nnwom 21Nnwom 23
Nnwom 22 Nkwa Asem (NA-TWI)
22 Me Nyankopɔn, me Nyankopɔn, adɛn nti na woagyaw me? Masu mmɔborɔsu repɛ mmoa, nanso ennu. 2 Mefrɛ wo awia, me Nyankopɔn, nanso wunnye me so. Mefrɛ wo anadwo, nanso minnya home. 3 Nanso wɔasi wo hene sɛ ɔkronkronni a Israel kamfo wo. 4 Yɛn nenanom de wɔn ho too wo so; wɔde wɔn ho too wo so, na wugyee wɔn nkwa. 5 Wɔfrɛɛ wo, na wɔnam so fii amane mu. Wɔde wɔn ho too wo so, na woanni wɔn huammɔ.